Bible Mu Nsɛm Hiob Di Nyankopɔn Nokware - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
SO ƆYAREFO yi ade yɛ wo mmɔbɔ? Wɔfrɛ no Hiob, na ɔbea no yɛ ne yere. Wunim nea ɔreka akyerɛ Hiob? ‘Dome Onyankopɔn na wu.’ Ma yɛnhwɛ nea enti a ɔbɛka asɛm a ɛte saa, ne nea enti a Hiob huu amane saa.
Hiob yɛ gyidini a otiee Yehowa. Na ɔte Us asase a ɛbɛn Kanaan no so. Na Yehowa dɔ Hiob yiye, nanso na obi wɔ hɔ a ɔtan no. Wunim saa nipa no?
Ɔne Satan Ɔbonsam. Kae sɛ Satan ne ɔbɔfo bɔne a ɔtan Yehowa no. Otumi maa Adam ne Hawa yɛɛ Yehowa so asoɔden, na osusuwii sɛ obetumi ama obiara ayɛ Yehowa so asoɔden saa ara. Na so otumi yɛɛ saa? Dabi. Wo de susuw mmarima ne mmea anokwafo pii a yɛasua wɔn ho ade no ho hwɛ. Wɔn mu baahe na wubetumi abobɔ wɔn din?
Bere a Yakob ne Yosef wui wɔ Misraim akyi no, Hiob ne obi a na ogye Yehowa di sen biara wɔ asase nyinaa so. Yehowa pɛe sɛ Satan hu sɛ ɔrentumi mma nnipa nyinaa mfa ɔkwammɔne so, enti ɔkae sɛ: ‘Hwɛ Hiob. Hwɛ sɛnea odi me nokware.’
Satan kae sɛ: ‘Odi wo nokware efisɛ woahyira no na ɔwɔ nneɛma pa pii. Na sɛ wuyi eyinom fi hɔ a, ɔbɛdome wo.’
Enti Yehowa kae sɛ: ‘Kɔ so. Yi fi hɔ. Yɛ Hiob bɔne biara a wopɛ. Na yebehu sɛ ɔbɛdome me anaa. Hwɛ sɛ wunkum no mmom.’
Nea edi kan no, Satan ma wobewiaa Hiob anantwi ne ne yoma, na okunkum ne nguan nso. Afei ɔmaa ahum kɛse kunkum ne mmabarima ne ne mmabea 10. Afei Satan de ɔyare bɔne bi baa Hiob so. Hiob huu amane pii. Ɛno nti na Hiob yere ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Dome Onyankopɔn na wu.’ Nanso na Hiob renyɛ saa. Na, nnipa baasa a wɔyɛɛ wɔn ho sɛ ne nnamfo bɛka kyerɛɛ no sɛ wayɛ bɔne bi. Nanso Hiob kɔɔ so dii nokware.
Eyi maa Yehowa ani gyei, na akyiri yi ohyiraa Hiob, sɛnea wutumi hu wɔ mfonini yi mu no. Ɔsaa no yare. Hiob woo mma 10 foforo a wɔn ho yɛ fɛ, na onyaa anantwi, nguan ne yoma a na ɔwɔ no mmɔho.
Wubedi Yehowa nokware daa te sɛ Hiob anaa? Sɛ woyɛ saa a Onyankopɔn behyira wo nso. Bere a asase so nyinaa ayɛ fɛfɛɛfɛ te sɛ Eden turo no, wubetumi atra so daa.
Dɛn na Satan pɛe sɛ ɔyɛ, na otumi yɛɛ saa?
Yehowa maa Satan kwan sɛ ɔnyɛ dɛn, na dɛn ntia?
Adɛn nti na Hiob yere ka kyerɛɛ no sɛ ‘ɔnnome Nyankopɔn na onwu’? (Hwɛ mfonini no.)
Sɛ wohwɛ mfonini a ɛto so abien no a, ɔkwan bɛn so na Yehowa hyiraa Hiob, na dɛn ntia?
Sɛ yɛn nso yedi nokware ma Yehowa te sɛ Hiob a, nhyira bɛn na yebenya?
Kenkan Hiob 1:1-22.
Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ bɛyɛ dɛn atumi asuasua Hiob? (Hiob 1:1; Filip. 2:15; 2 Pet. 3:14)
Kenkan Hiob 2:1-13.
Akwan horow abien a nsonsonoe wom bɛn na Hiob ne ne yere yɛɛ wɔn ade wɔ sɔhwɛ a Satan de bae no ho? (Hiob 2:9, 10; Mmeb. 19:3; Mika 7:7; Mal. 3:14)
Kenkan Hiob 42:10-17.
Esiane sɛ Hiob ne Yesu nyinaa dii Onyankopɔn nokware nti, nhyira bɛn na wonyae a na edi nsɛ? (Hiob 42:12; Filip. 2:9-11)
Sɛnea Hiob gyinaa pintinn maa Nyankopɔn na onyaa nhyira no hyɛ yɛn nkuran wɔ kwan bɛn so? (Hiob 42:10, 12; Heb. 6:10; Yak. 1:2-4, 12; 5:11)